Miteny amintsika ny fanahy
Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy.Jao. 15:26.
Nankasitraka ny fandrotsahana ny Fanahiny Masina ao anatinao ny Tompo. Any arnin'ireo fivorian-dasy sy any arnin'ireo sampang isan-karazany, dia nisy fitahiana lehibe natosaka teo aminao. Notsidihin'ireo mpitondra ny hafatry ny fahazavana sy ny fahamariana ary ny hery avy any an-danitra ianao, ary tsy tokony hoheverina ho zavatra hafahafa ny tokony hitahian'Andriamanitra anao. Fomba ahoana no ataon'i Kristy mba hahatonga ireo vahoaka voafidiny hilefitra eo Aminy? Amin'ny alalan'ny herin'ny Fanahy Masina; satria ny Fanahy Masina miteny ao antsaina, amin'ny alalan'ny Soratra Masina, ary manoratra ny fahamarinana ao am-pon'ny olombelona.
Nialoha ny nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nampanantena ny mpianany Izy fa haniraka ny Mpananatra. Hoy Izy: "Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aty aminareo Izy. Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao tontolo izao nt' fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana" -Jao. 16:7,8. "Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. nareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin'ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo" - and. 13,14. Tsy nisy vokany firy teo amin'ny toetra ara-panahin'ny lalàna io teny fikasan'i Kristy io, ary tsy azon'ny olona ny hevitra fonosin'ilay fandidiana mandrakizay, izay raketiny, vokatry ny fahabangan'ny Fanahin'Andriamanitra. Ireo olona izay tsy nilaza mikasika ny fitiavan'i Kristy dia tsy hahazo ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo sy Andriamanitra, ary tena mbola manjavozavo ny famaritana izany ao amin'ny fahalalan'izy ireo. Manjavozavo tanteraka ny fahazoan'izy ireo ilay fahasoavan'Andriamanitra mahagaga, tamin'ny nanomezany ny Zanany Lahitokana ho famonjena an'izao tontolo izao. Tsy azon'izy ireo hoe hatraiza ny fiantraikan'ny zavatra voalazan'ny lalàna masina, sy ny hoe tahaka ny ahoana no tokony hampiharana eo amin'ny fiainana ireo fitsipika sy fampianarana raketin'ny lalàna. Tsy tsapan'izy ireo hoe tombontsoa lehibe sy zavatra ilaina tahaka ny ahoana ny vavaka, sy ny fibebahana, ary ny fanatanterahana ny tenin'i Kristy.
Andraikitry ny Fanahy Masina ny maneho amin'ny saina ny toetoetry ny fanamasinana izay eken'Andriamanitra. Voazava ny fanahy vokatry ny asan'ny Fanahy Masina, ary voaova ho vaovao ny toetra, nohamasinina ary nasandratra. - RH, 30 Jan. 1894.